Kennaan, dandeettii fi beekumsi Oromoo kan fedhii saba Oromootiif hin taane ykn hin oolle hiikkaan isaa maali? -
bilisummaa July 14, 2013	Leave a comment
Akkuman armaan olitti, jalqaba barreeffama kiyyaa kana keessatti ibse, Obboo Fayyis nama kennaa (talent) qabuu dha jedheen amana. Haa ta’u malee, akka barreeffamni isaa kun mul’isutti, garuu innumtuu kennaa isaa kanatti fayyadamee; siyaasaa faallaa fedhii Oromoo ta’e keessatti dhaamsa biraa nuuf dabarsuu waan barbaade fakkaata. Tarii kanaaf jedhee, dursee Oromootni kennaa qaban, kan kilabiilee siyaasaa Habashaa (Habesha Political Clubs) keessatti dalagaa jiran, balaaleffatamuu hin qaban jechuuf ta’inaa laata?? Barreeffama Obboo Fayyis kana keessatti qabxiileen baay’ee mormisiisaa ta’an heduutu jiru. Haa ta’u malee, hunduma isaaniituu tokko tokkoon asitti dhiyeessee yaada koo irratti barreessuu irra; kan hafan dubbistootaaf dhiisuudhaan; xumura barreeffama kiyyaarratti, gaafiin ani Obboo Fayyis fi namoota akka isaatiif dhiyeessuu barbaadu: Kennaan, dandeettii fi beekumsi Oromoo, kan fedhii saba Oromootiif hin taane ykn hin oolle, hiikkaan isaa maali? kan jedhu ta’a. Ani dura Oromoo dha!! Oromummaatu dursa!!!!!!!!!!
Previous African exhibit finds home at American Swedish Institute
Next Hayyudureen Garee Shanee ABO Asmaraa Ummanni Oromoo Rakkoo Ulfaataan Qabamuu Ibsuun,Waamicha Qabsoo Godhe